Welcome to baidoanews.com | Al-Shabaab oo la sheegay in ay ka sii baa'ba ayaan Soomaaliya
Al-Shabaab oo la sheegay in ay ka sii baa'ba ayaan Soomaaliya
Sunday August 13, 2017 - 09:31:33 in Wararka by BANA Mogdishu Office
-Warbixinno sirdoon oo uu daabacay wargeeyska the standard media ayaa shaaca ka qaadaya in Al-shabaab ay qarka usaaranyihiin in ay Burburaan Sababo la xiriira Is aaminaad la'aan u dhexeeysa Xubnaha sare e Al-shabaab.
Warbixinadda sirddoonku waxaa ay sheegayaan in kalaqeeybsanaanta ugu weeyn ay ka Timid kadib markii ay xubo sare oo Al-shabaab ka Tirsan ay u hangal taageen in ay Xiriir lasameeystaan Ururka la baxay Qilaafadda Islaamka Halka kuwo kalena ay Doonayaan in ay Baaqi ku sii ahaadaan Al-Qaacidda.
Kalaqeeybsanaanta iyo is-aaminad la’aanta ayaa lasheegay in ay Al-shabaab ku sababtay in ay dhaxdooda is dagaalaan, iaygoo ku dadalaya in uusan ka soo dhax bixin Jaajuus Gudbin kara Xogta dhaxdooda ka jirta.
Warbixinadda Sirdoonka ee la daabacay ayaa sheegay in Qilaafka ugu weeyn uu dhexmaray laba Hugaamiye oo Magacooda lagu kala sheegay Shiiq Saciid Balbul iyo Abu kariim, kuwaas oo Qilaafkooda lasoo wariyay Bishii April ee Sanadkaan.
Nuqul kamid ah Warbixinta laga Helay sirdoonka aan Magaciisa la shaacin ayaa u Qorneeyd Sidan " Al-shabaabka Fadhigoodu yahay Somalia ayaa Siyar ukala furanaya iyagoo qaarkoodna ay isbaheeysanayaan, Al-shabaab waxaa ay Joogteynayaan Xiriirka Al-qaacidda Hase ahaatee Taliye yaasha dhexe ayaa Soo jeediyay in ay Xiriir la yeeshaan Daacish”
Warbixitaan uu daabacay standard media ayaa sidoo kale shaacisay in Qilaafka ka dhex jira Hugaanka Al-shabaab uu Bilow u yahy Bur-burkooda.